मोबाइल हेर्दा–हेर्दा दिक्क हुनुहुन्छ ? यसरी घटाउन सकिन्छ ‘स्क्रिनटाइम’
२०७७ जेठ ३२ आइतबार ०६:२०:००
एजेन्सी । कोरोना संकटकै कारण मानिसहरू नचाहँदा–नचाहँदै पनि हरेक दिन झन्–झन् लामो समय फोनमा बिताइरहेका छन् । नेल्सनको मार्च रिपोर्टअनुसार बाहिर जान नपाएकाले पनि मानिस अरू बेलाभन्दा ६० प्रतिशत बढी कन्टेट हेरिरहेका र सुनिरहेका छन् । यसरी अहिले अधिकांश मानिसमा स्मार्टफोनको लतको समस्या बढिरहेको छ । यसमा ३६ प्रतिशत युवावर्ग र एकचौथाइभन्दा धेरै अभिभावकसमेत राति कम्तीमा पनि एकपटक फोन ‘चेक गर्ने’ गरेको बताइएको छ ।
महामारी सुरु हुनुअघि नै अमेरिकालगायत केही देशका युवाले दैनिक कम्तीमा पनि ७ घण्टा २२ मिनेट मोबाइल स्क्रिन हेर्ने गरेका थिए । अहिले कोभिड–१९ को अवस्थामा त मान्छेको सामाजिक जीवनै ‘जुम भिडियो च्याट’ मा सीमित भएको छ । जसले चाहेर पनि स्क्रिट टाइम घटाउन असम्भव समान बनाइदिएको हो ।
वास्तवमा मोबाइल बन्द गरेर राख्न गाह्रो हुनुका पछाडि वैज्ञानिक कारण छन् । जस्तै कि हामीलाई ‘नोटिफिकेसन’ दिने चम्किला बटनहरू हाम्रो ध्यान केन्द्रित गराउने उद्देश्यले डिजाइन गरिएका हुन्छन् र मान्छेको मस्तिष्क चम्किलो र उज्यालो कुरा देख्दा अकस्मात् सतर्क हुने गर्छ । त्यसैले हाम्रो आँखा र फोन दुवैको भार कम गर्न स्क्रिनटाइम घटाउने सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको फोनको ब्याकग्राउन्ड कलरलाई ‘ग्रे स्केल मोड’ मा लैजाने हो जसपछि पूरै फोन खैरो वा रङबिनाको जस्तो देखिन्छ ।
थुप्रै रिसर्चले मानिसमा दृश्यमै आधारित रहेर प्रतिक्रिया देखाउने गरेको कुरा प्रमाणित गरिसकेका छन् जुन फोनको स्क्रिनमा पनि लागू हुने डारिया कस बताउँछिन् । उनी बेलायतको नटिङघाम ट्रेन्ट युनिभर्सिटीमा साइकोलोजीकी प्राध्यापक हुन् र इन्टरनेटको लत अनि स्मार्टफोनको अधिक प्रयोगजस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्छिन् । उनले भनेकी छन्, “हामीलाई एकपटक ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ वा ग्रे स्क्रिनको बानी पर्यो भने यसले उल्लेखनीय रूपमा फोनमा बिताउने समय घटाइदिनेछ ।
यसमा ग्रे स्केल मोड प्रायः सबै स्मार्टफोनको सेटिङमा उपलब्ध हुन्छ । वास्तवमा आँखाको समस्या हुनेहरूका लागि यो फिचर राखिएको हो । तर साधारण मान्छेले पनि स्क्रिनलाई कम आकर्षक बनाउन यसको प्रयोग गर्न सक्छ ।
फोनलाई ग्रे स्केल मोडमा कसरी लैजाने ?
१) आइफोनका लागि पहिले सेटिङ्स अनि जनरल त्यहाँबाट एससीबिलिटी यसपछि डिस्प्ले अकोमोडेसन र कलर फिल्टरा जाने र त्यहीँ गएर कलर फिल्टरलाई अन गरी ग्रेस्केल चुन्न सकिन्छ ।
२) एन्ड्रोइड फोनका लागि भने सेटिङ मा गएर एसेसीबिलिटीबाट ग्रेस्केल स्विच अन गर्न सकिन्छ ।
३) कुनै–कुनै एन्ड्रोइड फोनमा ग्रेस्केल मोड सीधै अन गर्न नसकिने पनि हुन सक्छ । त्यसैले यसका लागि पहिले सेटिङमा गएर एबाउट फोनमा जाने अनि बिल्ड नम्बर लेखिएको ठाउँमा सातपटक छिटोछिटो थिच्ने । त्यति हुनासाथ फोनमा यु आर नाउ अ डेभलपर भन्ने म्यासेज आउँछ । यसपछि फेरि सेटिङ्समा गएर डेभलपर अप्सन खोज्ने र त्यहाँबाट सिमुलेट कलर स्पेसमा गइ मोनोक्रोमेसी लेखेकोमा थिच्ने । अनि ग्रे स्केल मोड अन हुन्छ ।
युनिभर्सिटी अफ नर्थ डकोटाले गरेको हालैको एक अध्ययनमा पनि कलेजका विद्यार्थीहरूले ग्रे स्केल मोडको प्रयोग गरेपछि इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालका एपहरूमा बिताउने समय औसतमा ४० मिनेटले कम भएको पत्ता लगाएको थियो । कम रङ्गीन र कम उज्यालो भएको स्क्रिनले फोनप्रतिको हाम्रो आकर्षण घटाउने गर्छ । यही कारणले नै गुगल र इन्स्टाग्रामले पछिल्ला केही वर्षमा आफ्नो लोगो परिवर्तन गराएका हुन् । जसपछि गैरलाभकारी संस्था ‘सेन्टर फर ह्युमन टेक्नोलोजी’ ले मान्छेको पूरै ध्यान केन्द्रित गर्ने बिजनेस मोडलका कारण स्मार्टफोनको लत लाग्ने समस्या बढ्दै गएको र सबैको जीवन ‘लाइक’ पाउने प्रतिस्पर्धामा बदलिएको भनि विरोध गरेको थियो ।
तर फोन प्रयोगको प्रवृत्ति व्यक्ति–व्यक्तिमा फरक हुन्छ । जस्तै कि नोटिफिकेसन बटनले लगातार हाम्रो ध्यान केन्द्रित गराइरहँदा समेत कपितय मान्छे यस्ता पनि हुन्छन् जो १०० वटा इमेल आइसके पनि त्यसलाई नपढी बस्न सक्छन् । तर जे भए पनि हामी व्यक्तिगत रूपमा फोन कम प्रयोग गर्न प्रेरित भएर लाग्ने हो भने यस लकडाउनको समयमा ग्रे स्केल मोड अपनाउनुले धेरै मद्दत गर्न सक्ने बताइएको छ ।
ग्रे स्केल मोडको तरिकाबाहेक विज्ञहरूले स्क्रिन टाइम घटाउने अन्य सुझाव पनि दिएका छन्, जस्तै अति आवश्यकबाहेकका एपहरू ‘होमस्क्रिन’ मा नराख्ने र सीधा कल अनि टेक्स्ट म्यासेजबाहेक अन्य सामाजिक सञ्जालको नोटिफिकेसन बन्द गर्ने । यसमा नोटिफिकेसन अफ गर्नु फोनको प्रयोग घटाउनमा सबैभन्दा उपयोगी रहेको साइकोलोजी प्रोफेसर कस बताउँछिन् । किनकि नोटिफिकेसन चेक गरिरहने बानीले नै फोनको लतलाई जन्म दिन्छ ।
यसअघि गरिएका विभिन्न अध्ययनहरूमा पनि काम गरिरहेका बेला स्मार्टफोन टेबलमा यतिकै राख्दासमेत त्यसले मान्छेको काममा बाधा पुर्याउने र उत्पादकत्व घटाउने गरेको पाइएको थियो । यस्तोमा कहिलेकाहीँ फोनलाई आफू बसेको भन्दा अर्को कोठामा राख्नुले पनि मद्दत गर्ने कस बताउँछिन् । उनका अनुसार मानिसले मोबाइल फोनमा बिताउने समयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका हुँदैनन र विस्तारै थाहा नपाइ यसको लतमा पर्छन् । –सीएनएन